Xeer Ilaaliyaha Qaranka: 80% maxaabiista xabsiga dhexe waxa kasoo jeedaan beelaha la heyb sooco * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xeer Ilaaliyaha Qaranka: 80% maxaabiista xabsiga dhexe waxa kasoo jeedaan beelaha la heyb sooco
By A warsame	 Last updated Jan 28, 2015
Mareeg.com: Xeer Ilaaliyaha Guud Qaranka, Axmed Cali Daahir, Xeer Ilaaliyaha Guud Qaranka, ayaa wuxuu sheegay in dadka ku xiran xabsiyada Magaalada Muqdisho, ay boqolkiiba sideetan (80%) ka soo jeedaan beelaha laga tirada baddan yahay.
Xeer Ilaaliyaha, ayaa tilmaamay in beelahaasi ay soo gaarto dhibaatada ugu badan, isla-markaana ay xaqiiqdu tahay inay muuqato waxyeelada ba’an ee loogu geysanaayo Magaalada Muqdisho, sida uu yiri.
Dhanka kale Xeer Ilaaliyaha Guud Qaranka, ayaa xusay in Xabsiga Dhexe Xamar uu yahay xabsiga kaliya, ee ay heysato Dowladda Somaliya, ayna ku xiran yihiin 1,400 oo maxaabiis, xilli uu sheegay in loogu talla galay in lagu xiro qiyaastii 4,00 oo qof.
Isagoo sharaxaad ka bixinaayay qaabka uu u dhisan yahay Xabsiga Dhexe Xamar, ayaa wuxuu sheegay in laba qaybood uu ka kooban yahay. Qayb ka mid ah oo loogu talla galay in lagu xiro 2,00 oo ruux, laakiin ay ku xiran yiiin 1,400 oo qof, halka qaybta kalana ay burbursan tahay.
Axmed Cali Daahir, ayaa qaba in nolol xumo iyo caafimaad daraba ay ka dhalan karto ciriiriga daran, ee ka jira Xabsiga Dhexe Xamar.
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay ineysan dedaal badan ku bixin dib u habeynta Xabsiga Dhexe, iyadoo dadka Shabaabnimada loo heysto ku xirata Xabsi ku yaalla madaxtooyada iyo Godka Jilacow.
DEG-DEG: 20 Wasiiro wajiyo cusub leh oo lagu dhawaaqey (Akhriso)